प्रिमियर लिगको तयारी पूरा, खेलतालिका पनि सार्वजनिक – Khel Dainik
प्रिमियर लिगको तयारी पूरा, खेलतालिका पनि सार्वजनिक
पथरी (खेलदैनिक) । प्रदेश नम्बर एकको मोरङमा रहेको पथरीमा केही बर्ष यता फुटबल गतिविधीहरु ठप्प प्रायः थियो । तर अहिले त्यहि पथरीमा फेरि फुटबलले नयाँ गति लिने तरखरमा छ ।
“खेलकुद हाम्रो शान, स्थानीय खेलाडी उत्पादन हाम्रो अभियान” भन्ने मूल नाराका साथ यहि मंसिर २५ गतेदेखि पथरीमा टेन्सबर्ग पथरी शनिश्चरे फुटबल प्रिमियर लिग शुरु हुन गईरहेको छ ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको मुख्य सहयोग रहने लिगमा नगर खेलका विकास समिति लगायत अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुले पनि लिग सफल पार्न आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरेका छन् ।
स्थानीय स्तर मै फुटबललाई व्यवसायीक रुपमा अघि बढाउने उद्देश्यले पहिलोपटक खेलाडीहरुलाई विभिन्न क्लबहरुले लिलामीमा खरिद गरेका थिए । नगर भित्र रहेका कुल १४४ खेलाडीहरुलाई विभिन्न आठ क्लबहरुले न्युनतम ३ हजारदेखि १० हजारसम्म तिरेर खरिद गरेका थिए ।
लिगको पुरस्कार रकम
लिग विजेताले उपाधिसहित नगद १ लाख ७५ हजार हात पार्नेछ भने उपविजेताले ७५ हजार प्राप्त गर्नेछ । उत्कृष्ट खेलाडीलाई १० हजार प्रदान गरिनेछ भने अन्य व्यक्तिगत विधातर्फ पनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार राशीको प्रायोजन पथरी शनिश्चरे समाज हङकङले गरेको छ भने दोस्रो पुरस्कार प्रायोजन देवी डाँडा कन्स्ट्रक्सन, इलामले गरेको छ ।
लिगको इन्टरनेट साझेदार वल्ड लिंक प्रा.लि. रहेको छ भने लिगका सबै खेलहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण गोलनेपाल डटकममा हुनेछ ।
सहभागि टोली तथा खेलतालिकाः
लिगमा सहभागि आठ टोलीहरुलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहमा रहेका टोलीहरुले लिग चरणमा तीन खेलहरु खेल्ने छन् । प्रत्येक समूहको शिर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । फाइनल खेल पौष ११ गते शनिबारका दिन हुनेछ ।
समूह ए मा हिम हाउस हाइवे एफसी, शिखर एफसी, हेरिका न्युस्टार एफसी, श्रीजंगा एफसी रहेका छन् भने समूह बी तर्फ टेन नवोदय एफसी, द रियल ब्रदर्शन एफसी, वाइजीएफटी र देवीगञ्ज एफसी रहेका छन् । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल हिम हाउस हाइवे एफसी र शिखर एफसीबीच हुनेछ ।
← न्यु ईरा र अमुवा क्वाटरफाइनलमा फर्साटिकर युवा क्लब क्वाटरफाइनलमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने मंसिर २३, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? मंसिर २३, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली मंसिर २३, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा मंसिर २३, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित मंसिर २३, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा मंसिर २३, २०७७